Arc-rambi Kufambira Head
Akatungamirira Kufambira Head
KUFAMBIRANA MUSORO CHIEDZA
Waterproof akatungamirira Par
G uangzhou Aiweidy Lighting Acoustics Equipment Co., Ltd, tiri mumwe nyanzvi kugadzira uye vaitengesa emakambani ane pachikuva okuvimba. Our Company rakavambwa muna 1992, uye iye zvino ane makore 18 'ruzivo.
Company haangogoni kugadzirwa michina yemhando, asiwo dzinoverengeka yepamusoro, mukuru ano, mainjiniya kwounyanzvi uye kwokunatsiridzwa nyanzvi uye michina vashandi, vakawanda vanoshingaira, yokubatana rakaisvonaka mudonzvo. Company mukurumbira ari mutsetse, kwezvinhu zvemazuva pfungwa, uye nguva dzose pave yepamusoro mishonga kuti uvandudze makirisito makwikwi akaitwa. Muna 2003 boka akapfuura 09001: 2000 dzakawanda yepamusoro advertising, uye vakawana "CE", "CCC" advertising.
mukurumbira Aiweidys 'kutanga, unhu wokutanga, utsanzi wokutanga, basa rokutanga "kusvika, mweya vanhu -oriented, rwokugadzirwa utsanzi uye inogona kuenderera mberi" bhizimisi uzivi, sezvo nguva dzose, kupa vatengi hwedu chemhando yepamusoro kupfuura vakarongeka zvinhu uye mabasa izvo dzimwe vatengi kudzokera kwatiri rubatsiro uye rudo.
G uangzhong Aiweidy Lighting Acoustics Equipment Co, Ltd, ndiko wokutsvakurudza uye kuvandudza, kugadzira, rokutengesa uye basa nemazvo chiedza uye ruzha munhandare pamusoro yepamusorosoro emakambani Company iri muna Baiyun District of Guangzhou City, kufukidza 15 acra, kuvaka nzvimbo pamusoro 25000 mamita ^ 2. Garden miriwo, zvishongo tsime mukati mudhamu. 700 M ^ 2 fekitari kuzvisikwa multi-yaishandiswa Studio, vanopfuura 1,000 mativi metres ano sehofisi. Pashure pemakore 20 okukura, boka rava kumativi nyika yakakura kwazvo chikero emakambani Product maguta aivigirwa kuti pose, uye mudzimba uye dzimwe vatengi zvakafanana.
Guangzhou Aiweidy Lighting Acoustics Equipment Co., Ltd, tiri mumwe nyanzvi kugadzira uye vaitengesa emakambani ane pachikuva okuvimba. Our Company rakavambwa muna 1992, uye iye zvino ane makore 18 'ruzivo. Takaita vava kombiyuta Network utariri hurongwa, uye unhu kutarisirwa gadziriro zvichinyatso enderana ISO9001: 2000 zvinodiwa kuti kugadzirwa. Zvigadzirwa edu certificated ne "CCC" uye "CE" uye "RoHs".
Aiweidy zvigadzirwa zvine mukurumbira wakanaka pamusika dzakawanda, kunyanya nokuda kwedu kubvongodzwa musoro zviedza, akatungamirira magetsi uye Outdoor mwenje. Zvino, zvinhu zvedu aivigirwa kuna Europe, Southeast Asia, kuMiddle East, North neSouth America nedzimwe nyika uye kumatunhu. Achitarira mberi, vashandi vose Aiweidy achatanga kukoshesa tenet rakanaka kutanga, basa rokutanga, utsanzi kutanga uye kutendeseka samagariro kushumira vatengi uye shamwari kubva kumba uye kunze.
Address: . 2 / F, No. 3, South Xinghe 5th Road, 1st Industrial Area, Taihe, Baiyun DIST, Guangzhou, Guangdong, China (Mainland)